Talooyin kaa caawinaya Inaad Aad U Yarayso Shidaalka Gaadhigaagu Isticmaalo - Daryeel Magazine
Talooyin kaa caawinaya Inaad Aad U Yarayso Shidaalka Gaadhigaagu Isticmaalo
Dadka baabuurta wataa meel kasta oo ay joogaan waxa ugu badan ee ay ka cawdaan waa shidaalka oo ku badan, haddaba marka laga yimaaddo in baabuurtu ay sidooda u kala shidaal cabbis badan tahay, mishiinka saaran oo kala duwan awgeed, waxaa jira arrimo kale oo iyaguna kaalin weyn ka qaata in uu gaadhigu shidaal badan isticmaalo, waxaa ka mid ah da’da gaadhiga, beddelka saliidaha, balaagyada iwm.
Marka intaas oo dhan laga yimaaddo waxaa iyaguna jira qaladaad ka dhaca qofka gaadhiga isticmaalaya ama gaabis dhinaciisa ah oo sababa in gaadhigu uu shidaal badan isticmaalo. Qormadaan ayaa si fiican u soo bandhigaysa qaar ka mid ah qaladaadkeenna keena in gaadhigu uu shidaal badan innaga isticmaalo iyo talooyin muhiim ah oo innaga caawinaya in aynu shidaalka tashiilanno. Waxa aanay kala yihiin:
1. Culayska: Mar kasta waxa aad hubisaa in culayska saaran gaadhigaagu aanu badnayn. Waxaa xaqiiqo ah in alaabta, dadka iyo guud ahaan culays kasta oo gaadhiga saarani uu qayb weyn ka qaato isticmaalka shidaalka ee gaadhiga, sidaa awgeed ku dadaal in mar kasta uu gaadhigaagu fududaado, wixii aan muhim ahayn, culaysna ku keenayana aad ka dejiso.
2. Xawaare munaasab ah: Gaadhiga oo mar kasta socod gaaban ku jira, ama dhaqaaq joogsi lagu wadaa waxa ay culays saartaa mishiinka oo u baahda in laawar badan la siiyo, waxa aanay ka mid tahay sababaha keena in gaadhigu shidaalka aad u cabbo. Xawaaraha gaaban ee gaadhigu waxa kale oo uu keenaa in isbiidhku ku raago, taasina waxa ay sii badisaa culayska fuulaya mishiinka. Talada ugu fiicani waa in intii suurtogal ah gaadhiga lagu wado xawaare munaasab ah oo dabcan darawal kastaa dareemi karo in uu gaadhigu si fudud u socdo.
3. Isticmaalka badan ee joojiyaha (Biriigga): Isticmaalka badan ee bireeggu waxa uu keenayaa khalkhal dhinaca xawaaraha gaadhiga ah, sidaa awgeed mishiinka gaadhigu waxa isticmaalayaa shidaal inta caadiga ah ka badan, mar kasta oo inta la istaago haddana la dhaqaaqayana shidaalka gaadhigu isticmaalayaa waa uu kordhaa, si ka duwan marka uu xawaare siman ku socdo gaadhigu. Talada ugu fiicani waa in darawalku uu si xikmadaysan oo xirfadi ku dheehantay u isticmaalo bireegga gaadhigiisa.
4. Qaboojiyaha (AC): Haddii aad niyadda ku hayso in aad shidaalka u madhxiso gaadhiga, Iska jir isticmaalka badan ee qaboojiyaha. Mar kasta oo aad qaboojiyaha (AC) shiddo waxa aad culays saaraysaa mishiinka gaadhiga, taasna macnaheedu waa in uu mishiinku kordhinayo shidaalkii uu isticmaalayey. Khubarada arrimahan u kuurgalay waxa ay sheegayaan in isticmaalka qaboojiyaha oo aad iska deysaa ay ku faa’idaynayso in aad madhxisato boqolkiiba 20 shidaalkii uu gaadhigu kaa isticmaalayey markii uu daarnaa qaboojiyuhu.
5. Gaadhiga istaadhnaada isaga oo aan socon: Waxaa fiican in haddii uu gaadhigaagu taagnaanayo wax ka badan laba daqiiqo aad baqtiiso, xitaa marka uu jidku cidhiidhiga yahay ee aad dareensantay in muddo aad taagnaanayso gaadhiga baqtiim taasi waxa ay leedahay laba faa’ido oo kala ah; in shidaalka isticmaalkiisu yaraado iyo in gaadhi uu nasto oo uu mishiinku helo fursad uu dib ugu soo ceshado firfircoonida.
6. Naqaska taayirrada: Mar kasta oo uu dhiman yahay naqaska taayirku u baahan yahay, waxa ay keenaysaa in gaadhigu uu ka cuslaado inta dabiiciga ah, taasina waxa ay culays ku kordhinaysaa mishiinka, waxaana ka dhalanaysa in uu shidaal inta caadiga ah ka badan isticmaalo. Ku dadaal in taayirrada (Shaagagga) gaadhigaagu ay noqdaan kuwo uu ku jiro naqas ah inta saxda ah ee loogu tala galay.
7. Adeegsiga laawarka (Xawaareeye ama saliidda): Si aad uga taxaddarto in gaadhigu uu kaa isticmaalo shidala badan, waxa aad ku dadaashaa in aad laawarka gaadhiga si deggen oo aan cadaadis xooggan ama kedis ahi ku jirin u qabato laawarka ama saliidda gaadhiga. Tusaale ahaan marka aad dhaqaaqayso ama aad doonayso in aad kordhiso xawaaraha aad ku socoto. Laawarka sida ugu habboon ee aad u isticmaali kartaa waa in aad si deggen oo dhowris u eeg aad hoos ugu cadaadiso adiga oo aan xoog u saarayn cagta si aanu u cabudhin, ama aan si aan isu dheelli tirnayn kolba dhan u wadayn.
Talooyin Kaa Caawinaya Inaad Yareyso Lacagta Internet-ka Ee talefankaagu Isticmaalo 10 Qodob Oo Kaa Caawinaya Inaad Naftaada Horumariso W/Q: Hinda Cabdi Talooyin Kaa Caawinaya In Battery-ga Laptop-kaaga In Mudo Ah Ku Hayo